Momba anay - Linqing Xinri Precision Bearing Co., Ltd.
SHANDONG XINRI BEARING TECHNOLOGY CO., LTD dia orinasa mpamokatra entana manokana momba ny fianakaviana nanomboka tamin'ny taona 2006. Ny filozofiantsika: mahazo fitokisana amin'ny alàlan'ny fahamendrehana, mandresy amin'ny kalitao, mivoatra amin'ny alàlan'ny fanavaozana, ary manao ny fahafahantsika manokana amin'ny alàlan'ny fanahy mazoto.
Ireo toetra ireo dia nanompo anay tsara, nahazo ny XRL laza malaza eo amin'ireo mpiara-miasa sy mpanjifa mahatoky.Vokatr'izany, ny XRL CO., dia manana tambajotram-pivarotana sy fitsinjarana efa miorina tsara, na eto an-toerana na any ivelany.
Miaraka amin'ny varotra isan-taona maneran-tany mihoatra ny 150 tapitrisa dolara amerikana sy ny fahafaha-manao isan-taona mihoatra ny 7000 tapitrisa, amin'ny trano mirefy 2 tapitrisa metatra toradroa, XRL dia iray amin'ireo mpamokatra lehibe eran-tany.Raha ny marina, efa amidy any amin'ny firenena 120 mahery eran'izao tontolo izao ny XRL.Na ho an'ny fambolena, famokarana lamba, fitrandrahana harena ankibon'ny tany, fanontam-pirinty isan-karazany eny amin'ny seranam-piaramanidina, amin'ny rafitra fanamafisam-peo, fitaovana fampitana, tobin-jiro an-tsambo, kilalao na ho an'ny fitaovana ara-pitsaboana, fiara, XRL dia tsy misy afa-tsy ny sanda tsara indrindra amin'ny tsena midadasika. .Mandritra izany fotoana izany, XRL dia voamarika ihany koa amin'ny serivisy ambony indrindra, mandray andraikitra, 24/7/365 - ny mailaka sy ny voicemails rehetra dia voavaly ao anatin'ny adiny enina, azo antoka!
Serivisy tsara indrindra
Serivisy tsara aorian'ny fivarotana: (garantie kalitao 12 volana, azo alaina ny vola na averina raha misy olana amin'ny kalitao amin'ny toe-javatra mahazatra).
OEM/Customized fanompoana dia raisina.
7X24 ora an-telefaona na fanohanana teknolojia an-tserasera maimaim-poana.
(1)Manana fitaovana fitiliana kilasy voalohany izahay mba hamantarana ny fisian'ny mari-pamantarana data isan-karazany ary hifehezana ny kalitaon'ny fitondra.
Isaky ny tsy maintsy hita aloha ny bearings raha mahafeno fepetra ny kalitao ary esorina mivantana ny bearings tsy mendrika.
Noho izany dia afaka mahazo ny fitokisan'ny mpanjifa lehibe isika, ary mamatsy azy ireo mandritra ny taona maromaro.
(2)Manana ny fahaiza-manao R & D izahay, mba hanampiana ny mpanjifa hamaha ny olan'ny tsy manara-penitra bearings.
Afaka manova ny marika manokana ihany koa isika araka ny takian'ny mpanjifa.
(3)vidiny, ny fanamboaranay dia miantoka fa ny vidiny manerana an'i Shina dia tena mifaninana.
Tsara kokoa ho anao ny mampitaha ny vidiny sy ny kalitao amin'ny mpamatsy.
Saingy fantatry ny rehetra fa tsy afaka mividy ny vokatra avo indrindra amin'ny vidiny ambany indrindra ianao,
fa ny vokatray no kalitao tsara indrindra raha toa ka mitovy ny vidiny.
(4)Ny kalitaon'ny XRL mitondra: ambony noho ny fenitra ISO: 9001 sy Gost.
Tonga eto ny Slogan
Ny teny filamatra
Ny kalitao voalohany,
Ny ho marika voalohany amin'ny indostrian'ny Bearing manerantany
Amboary ny orinasa malaza eran'izao tontolo izao ary Mamorona ny marika malaza indrindra any Shina
Miziriziry foana amin'ny kalitao avo lenta, manohina ary mirary vidiny mirary
1.Ny dingana famokarana rehetra, toy ny forging, ny fihodinana, ny fitsaboana hafanana, ny fikosoham-bary, ny fanangonana ary ny famonosana, dia vita ao amin'ny orinasanay.Izany no mahatonga ny XRL Bearing afaka manome anao ny baolina tsara sy ny roller bearings amin'ny vidiny ambany indrindra ary afaka mahafeno ny fandefasana ara-potoana.
2. Amin'ny maha ISO9001: 2000 mpanamboatra voamarina, dia nametraka rafitra traceability vokatra.Ankoatra izany, XRL Co., dia manana ekipa ara-teknolojia matanjaka miaraka amin'ny injeniera Japoney hamaha olana isan-karazany amin'ny fampiharana sy ny fampiasana ny bearings.
Manolotra karazana bearings feno izahay, anisan'izany ny Bearings Roller Tapered, Bearings Ball Deep Groove, Bearings Pillow Block, Bearings Cylindrical Roller Bearings, Bearings Spherical Roller Bearings, Bearings Wheel Hub sy ny hafa.
1. Manana fitaovana fitiliana kilasy voalohany izahay mba hamantarana ny mitondra ny angon-drakitra isan-karazany sy ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny mitondra.
2. Manana ny fahaiza-manaontsika R & D izahay, mba hanampiana ny mpanjifa hamaha ny olan'ny bearings tsy manara-penitra.
Ankoatra ny varotra an-trano, ny XRL dia efa nanondrana tany amin'ny firenena sy faritra mihoatra ny 120 any ampitan-dranomasina anisan'izany Japana, Korea, Malezia, Singapore, Thailand, Vietnam, Indonezia, Pakistan, Alzeria, Arabia Saodita, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Pero, Bolivia, Chile , Kenya, Zambia, Etazonia, Kanada, Meksika sns..